Sababaha Aan U Dhigi Karin Muuqaaladaada
Talaado, Agoosto 12, 2014 Tuesday, May 3, 2016 Douglas Karr
Macaamil shaqo xoog leh ka qabanaya dhinaca daabacaadda isla markaana arkaya natiijooyin aan caadi ahayn ayaa la weydiiyay waxa ra'yigeygu ka qabo iyaga ee martigelinaya fiidiyowyadooda gudaha. Waxay dareemeen inay sifiican u xakamayn karaan tayada fiidiyowyada isla markaana ay hagaajin karaan ku habboonaynta raadinta. Jawaabta oo koobani waxay noqotay maya. Ma ahan sababtoo ah ma aaminsani inay ku fiicnaan doonaan, sababtoo ah waxay dhayalsanayaan dhammaan caqabadaha cajiibka ah ee fiidiyowga martigelinaya ee leh
Saaka waxaan warbixino gaarsiinay mid kamid ah macaamiisheenna oo nala joogay dhowr sano. Waxay leeyihiin degel weyn oo ku kordhay taraafikada raadinta la xidhiidha ku dhowaad 200% sanadkii la soo dhaafay waxayna leeyihiin noocyo kala duwan oo sawir iyo caddaan ah si ay ugu qanciyaan iibsadayaasha inay isdiiwaan geliyaan oo ay bilaabaan inay eegaan xalkooda. Waxa kaliya ee aan ka aragno inay ka maqan yihiin degelladoodu waa waxyaabaha ku jira fiidiyaha. Waan ognahay, gacanta koowaad, fiidiyowga inuu yahay